Muxuu gudoomiyaha gobolka Nugaal u eedeeyay Ra’iisul wasaaraha Somalia • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Muxuu gudoomiyaha gobolka Nugaal u eedeeyay Ra’iisul wasaaraha Somalia
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xirsi Xasan Gu’jir oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa eedeyn u jeediyay xukuumada uu hogaamiyo Xasan Cali Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Gudoomiye Gu’jir oo u muuqda mid dhexda ka galay arimo siyaasadeed ayaa Xukuumada federaalka ahi ku eedeyay in ay faraha kula jirto arimo liddi ku ah degenaanshiyaha Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal oo ay ku xarun u tahay caasimada looga arimiyo Puntland ee Garoowe.
Waxyaabaha uu gudoomiyaha gobolka Nugaal ku eedeyay Ra’iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya waxaa qeyb ka ah faragelin uu sheegay in uu ku hayo arimaha siyaasada gudaha ee maamulkiisa,siyaasiyiin laga soo diray Muqdisho oo uu sheegay in lagu hagardaaminayo maamulkiisa iyo xildhibaano iyo wasiiro Puntland ku matala Puntland oo uu xusay iyana in ay wataan qorshayaal uu soo maleegay Ra’iisul wasaaraha.
“Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ha ka waantoobo dadka ay arrimaha siyaasada u soo dirsanayaan oo gobolka Nugaal ka socda,waxaan u soo jeedinaaya in dadkaas siyaasad khaldan loo soo dirsado, ayna iska horkeenaan shacabka iyo dowladda Federaalka, wax walba nidaam iyo waddo loo soo maro ayay leeyihiin, waa in loo soo maraa, Wasiirada iyo Xildhibaanada la soo dirayo iyo dadkan isku xirnaasho shaqo maleh” ayaa kamid ahaa hadaladii Guddoomiye Gu’jir.
Eedda gudoomiye Gud’jir marka laga soo tago waxaa jiray misana baaq codsi ah oo ku socday xukuumada uu hogaamiyo RW Xasan Cali kaas oo ku aadan in la fuliyo mashruux horey uu u balanqaaday Ra’iisul waasaraha kaasoo ahaa in uu dayactir ku sameynayo garoonka ciyaaraha Garoowe ee Mire Awaare oo gudoomiye gobolka Nugaal sheegay in weli aanu fulin balanqaadkaasi.
Hadaba suaa’alaha isweydiinta mudan ayaa ah sida ay isu qaban karto baaq fulineed iyo eed loo jeediyo masuul xil haya iyo tan kale oo ah waxa xiligan kusoo beegay eedda gudoomiye Gu’jir maadama xiliga lagu jiraayi uu yahay mid xasaasi oo kala guur ah mase noqon kartaa eedde gudoomiyahan mid siyaasadeysan oo ay daaha gadaashiisa ka taagan tahay xukuumada Madaxweyne Gaas.